Updated on 05.01.2020 05.01.2020 by Fenrishakar
Tobacco Road - Rare Earth - Get Ready (Vinyl, LP, Album), One Look At You - Acquaviva And His Orchestra - The Exciting Sound Of Acquaviva And His Orchestra (V, Defeated - Comeback Kid - Through The Noise (CD, Album), Kirottu Yksinäisyys - Vesterinen Yhtyeineen - Kirottu Yksinäisyys (CD, Album), 你要的男人是那一種 - 周華健* - 花·心 (CD, Album), Το Τζίνι - Καίτη Γαρμπή - Γυαλιά Καρφιά (Vinyl, LP, Album), Das Kann Mir Keiner Nehmen (Ik Ben Gelukkig Zonder Jou), Ill Walk Beside You - David Hughes (11) - Songs You Love (Vinyl, LP, Album), Terrorism Era - Pharaoh MC - Terrorism Era (CD, Album), Freestyle Affair - DJ Senator & The Bagman - Clip Top EP Vol. 1 (Vinyl)
9 thoughts on “ Bao Angèle* & Volafeno Arnie - Tsara Ny Mody An-Tanindrazana / Tsanga Belaka (Vinyl) ”
Antananarivo Azo vahana tsara ny olan’ny fako. 16/09/ Araka ny lalàna mifehy azy sady voasoratra amin’ny andinim-pitantanana sy eo amin’ny rafitra dia anjaran’ny minisitera fa tsy an’ny kaominina akory ny fisahanana ny fitantanana ny fako.
Tenin’ny Tanana Malagasy: Inona ilay vaovao tsara avy amin’Andriamanitra natao ho anao? Nahoana no azo inoana izany? Mamaly ny fanontaniana ara-baiboly fametraky ny olona ity bokikely ity.
TSY ny famakiana andininy ao amin’ny Baiboly fotsiny no takina, rehefa mampianatra ny hafa. Hoy ny apostoly Paoly tamin’i Timoty, namany: “Mazotoa manolotra ny tenanao amin’Andriamanitra ho olona voazaha toetra, dia mpiasa tsy mahazo henatra, mizara tsara ny teny fahamarinana.”—2 Tim. Midika izany fa tsy maintsy mifanaraka amin’izay ampianarin’ny Baiboly ny fomba.
Tandremo Tsara ny ‘Fahaizanao Mampianatra’ ‘Torio ny teny, mananara, teneno mafy ireo mila tenenina, manomeza torohevitra, ary aoka ianao hahari-po .
Sesilany ny fanesorana sy fanendrena olom-panjakana ambony eto amin’ny tany sy ny fanjakana ary matetika misy foana io isak’izay misy filankevitry ny minisitra. Am-polony maro ary mananika ny an-jatony isak’izay mandeha. Fanatsarana noho ny fiovan’ny mpitondra eto amin’ny firenena no ambara fa hevi-dehibe fonosin’ireny, saingy maro ny mandika fa mba fanomezana valim-babena ny.
Famindarana sy fanetsana zana-Famindarana sy fanetsana zana tongolotongolotongolo • Tondrahana alohan’ny hamin- darna azy • Zanatongolo matanjaka tsara no afindra (misy raviny 3 na 4) • Tapahina ny 1/3 ny raviny sy ny 1/2 ny fakany • Ny elanelany dia 20x20sm na 20x25sm • Atsatoka mahitsy tsara FikojakojanaFikojakojana • Soloina izay tsy mitsiry.
Lasa nahafantatra tsara kokoa ny fivavahan’izy ireo àry ny olona. Resahin’ny Asan’ny Apostoly toko faha ny nitsarana an’i Paoly teo anatrehan’i Feliksa, governora tao Jodia. Efa nandre momba ny zavatra inoan’ny Kristianina io governora io. Nilaza ny Jiosy fa nandika ny lalàna romanina i Paoly tamin’ireto zavatra telo ireto.
Nisy ny fanadihadiana nataon’izy ireo tamin’ny ankizy miisa efa nivoaka tao ka ny 45% amin’ireo no nahita asa mifandray tsara amin’ny fiofanana, 25% miasa amin’ny sehatra varotra, 10% no nahatsangana orinasa madinika ary ny ambiny kosa dia miasa amin’ny fanjakana sy sehatra hafa mihitsy. Nanamafy ihany koa ny tonian’ny.
Tsia angamba, satria mbola misy zavatra hafa eritreretinao izao. Raha izany no izy, dia aza mody mihaino fotsiny. Ajanony kely izay zavatra ataonao raha mety, dia mifantoha amin’ny vadinao. Azo atao koa anefa ny miteny hoe aleo rehefa kelikely miresaka tsara.—Toro lalan’ny Baiboly: Jakoba Aza tapahina ny teniny.
Dahn on Bao Angèle* & Volafeno Arnie - Tsara Ny Mody An-Tanindrazana / Tsanga Belaka (Vinyl)